Voadika ny 18 Septambra 2018 11:41 GMT
Nanamarika ny faha-21 taonan'ny horohorontany tamin'ny taona 1988 nandravarava faritra maro tany avaratr'i Armenia ny Alatsinainy teo, horohorontany izay nahafatesana olona 25 000 ary tsy manan-kialofana marobe. Na dia teo aza ny fitosaky ny vola betsaka ho fanarenana avy amin'ireo malala-tanana iraisampirenena, mbola henjana kokoa mihoatra ny roapolo taona ny fepetra ho an'ireo olona an'arivony mbola monina ao amin'ny domiks – tranom-bahiny vonjimaika toy ny tranobongo tsotra na koa kaontenera vy.
Mbola tsy fantatra ny tena isan'ireo fianakaviana monina ao anaty toe-javatra tahaka izany ao Gyumri, tanàna lehibe faharoa lehibe indrindra any Armenia, saingy heverina fa manodidina ny 4.000-7.000 izy ireo. Na dia nampanantena hanome trano fonenana ho azy ireo aza ny governemanta amin'ny faran'ny taona, mbola mifantoka amin'ny olana atrehin'ny maro ny bilaogera. Peaches and Pomegranatesy nitsidika an'i Gyumri andro mialoha ny tsingerintaona.
Manoratra ao amin'ny bilaoginy Birthright Armenia, mpilatsaka an-tsitrapo foko Armeniana iray avy ao amin'ny Diaspora mitantara ny fotoanany tao an-tanàna tamin'izy niara-niasa tamin'ny fikambanana mpanao gazety sy ny FTMF=ONG ao an-toerana Caritas Armenia, sy fihaonana iray manokana.
Mpitsidika vahiny iray hafa tamin'ny tsingerintaona tao Gyumri i Ashley Corinne Killough, manam-pahaizana nivoaka an'i Fullbright any Armenia. Namoaka kaonty sy raki-peo diaporama (etsy ambony) tamin'ny fihaonana hafa natao tamin'ny alalan'i Caritas Armenia tao amin'ny bilaoginy izy.
Vao herinandro mahery kely, nalefa tao amin'ny bilaogiko Frontline Club ireo sary sy sioka hafa avy amin'ireo notsidihana niaraka tamin'i Caritas Armenia. Nisy ihany koa ny fanadihadiana an-dahatsary niarahana tamin'ny fampitam-baovaon'ny FTMF na ONG iray ao an-toerana sady olon'ny gazety.
Ho an'ireo mpamaky monina any Armenia, manana fampiratiana tetikasa an-tsary taona maro mandrakitra ireo fianakaviana ao Gyumri hatrao Yerevan hatramin'ny 6 Janoary 2010 i Anush Babajanyan, mpaka sary . Azo jerena ao amin'ny bilaoginy manokana sy ny Patchwork an'ny Transition Online's ny sasany amin'ny asany.